किन ४० वर्ष कटेपछि विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्न चाहान्छन् महिला ? – ramechhapkhabar.com
किन ४० वर्ष कटेपछि विवाहेत्तर सम्बन्ध राख्न चाहान्छन् महिला ?
विवाहवेत्तर सम्बन्ध बनाउन पुरुषवादी समाजमा पुरुष नै हाबी भएतापनि एक अध्ययनले महिला पनि विवाहवेत्तर सम्बन्ध राख्न चाहान्छन् भन्ने देखाएको छ । अध्ययनमा उल्लेख भएअनुसार ४० वर्ष कटेका महिलाको ठूलो संख्या विवाहेत्तर सम्बन्धमा रहन्छन् । अध्ययनले बताएअनुसार ४० वर्षपछि अर्को सम्बन्धमा रहनुका विविध कारणहरु छन् ।